UGoogle Allo usungule uguqulelo lwewebhu (kuphela ngeChannel) | Iindaba zeGajethi
Ukubheja kukaGoogle kutshanje kwimicimbi yonxibelelwano kuvela esandleni sikaGoogle Allo, entsha inkonzo yekhuriya umfanekiso okhawulezayo ubufuna ukufumana iqhekeza lakho lephayi Icandelo apho i-WhatsApp iyinkosi. Kude kube ngoku, iGoogle Allo yayinokwenzeka kuphela ngokusebenzisa usetyenziso olwahlukeneyo lweselfowuni (i-Android okanye i-iOS). Nangona, iinjongo zenkampani enkulu ye-Intanethi zazisele zisaziwa: yiza le nkonzo kumava edesktop. Kwaye sele kunjalo: IGoogle Allo ngoku inokusetyenziswa kwikhompyuter yakho.
I-WhatsApp okanye iTelegram sele ikwenzile oku ukusebenza kangangexesha elithile. Yi Kuyinyani ukuba iTelegram izimele, ngelixa i-WhatsApp idinga ifowuni ukuze isebenze kwisikhangeli sekhompyuter. Kwaye lo ngumzekelo olandelwe nguGoogle kuGoogle Allo.
Ngaphezu koko, isikhokelo ekufuneka usilandele kwiGoogle Allo ukuze usebenze kwisikhangeli sakho sewebhu sinye njengokuba usenza kuWhatsApp. Siyazichaza, nangona kuqala sisilumkiso: isebenza kuphela phantsi kweGoogle Chrome (hayi iFirefox, hayi iSafari, hayi i-Edge). Okwangoku Iya kusebenza kuphela ukuba uneselfowuni ye-Android; kwi-iOS umsebenzi uza kufika kamva, nangona bengakhange baveze umhla othile.
Kodwa njengoko sikuxelele. Into yokuqala kukuya kuhlobo olubhaliweyo lukaGoogle Allo ukusuka allo.google.com/web. Nje ukuba ungene ngaphakathi, ikhowudi yeQR iya kuvela. Ewe, into elandelayo kukuvula iGoogle Allo kwiselfowuni yakho. Kukhetho lweemenyu kufuneka cofa kwindawo ethi 'Allo web' Kwaye uya kubona ukuba umsebenzi wekhamera yefoto uvulela wena ngqo. Oku kuya kuba kukuskena ikhowudi evela kwiscreen nayo.
Ungqamaniso kwangoko. Nje ukuba ikhowudi yamkelwe, ungathetha kwikhibhodi yekhompyuter yakho. Nangona, siyaphinda sinyanzelisa: kuxhomekeke kwiselfowuni ngawo onke amaxesha. Ukongeza, ukusuka kuGoogle baphawula ukuba kukho imisebenzi efumaneka kuphela kuhlobo lweselfowuni. Kwaye zezi zilandelayo:
Qhagamshela, tshintsha okanye ucime iiakhawunti zikaGoogle
Yongeza okanye ususe amalungu eqela
Yenza ikopi yolwazi
Izaziso kunye noseto lwangasese
Ezinye izinto zengxoxo, njengokuthatha ifoto, ukucima incoko, ukuvimba abafowunelwa, okanye ukuqala ingxoxo nomntu ongekho kunxibelelwano lwakho
Ukugxekwa kwale nkcukacha yokuxhomekeka kwiselfowuni akukhawulezi ukuza. Kwaye abanye abasebenzisi bathi yonke into ngeyilula ukuba inokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwikhompyuter, kuqala, ngaphandle kokuxhomekeka kwiselfowuni. Kwaye okwesibini, ukunganciphisi ukusetyenziswa kwayo kwi-Android -ngoku nje- kunye nokuvumela ukufikelela kuzo zonke iinkonzo ezinkulu ze-G: ngeakhawunti yomsebenzisi we-GMail.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UGoogle Allo usungule ingxelo yewebhu (kuphela ngeChannel)